चर्चित लोकगायक पशुपति शर्माले गरे दोस्रो विबाह, जेठी पत्निलाई धोका! – Newsharpal24
April 6, 2021 adminLeaveaComment on चर्चित लोकगायक पशुपति शर्माले गरे दोस्रो विबाह, जेठी पत्निलाई धोका!
काठामाडौँ । चर्चित लोकगायक पशुपति शर्माले गरे दोस्रो विबाह गरेका छन् । गायक पशुपति शर्माले सुन्दरी सगुन शाहीसँग विबाह गरेका हुन् । गायक शर्माको यो विबाह वास्तविक नभई उनको नयाँ गीत म म .रें भनेको एक दृश्य हो ।
भिडियोमा चर्चित लोकगायक पशुपति शर्माले आफ्ना जीवनका भोगाइहरुलाई निकै रोचक ढंगल प्रस्तुत गरेका छन् ।पशुपति शर्मा एक बहुचर्चित नेपाली लोक गायक तथा अभिनेता हुन्। उनको जता नि चोर बोलको शर्माको पछिल्लो गीत युट्युबमा सार्वजनिक भएको हो ।
उनले यसअघि ल्याएको “लुट्न सके लुट” गीतका केही दृश्य र शब्दका कारण विवादित बनेको थियो । यस गीतमा पनि पशुपति शर्माले नेपालको राजनीति, प्रशासन क्षेत्रमा रहेको विकृतिको कुरा उठाएका छन् । उनले नेपाली समाजमा रहेको विकृति, काम नगर्ने तर हल्ला बढी गर्ने प्रवृत्ति आदिलाई पनि ब्यङ्ग्य गरेका छन् ।